ဇိမ်ခံပစ္စည်းလိုင်စင် Digital: ၂၀၂၁ မှာ Power Digital Trends က ဘာလဲ? - Pandaily
Categories: Industry ကိုXintian Wang မတ် 5, 2021 မတ် 5, 2021 မှာ Posted
ႏိုင္ငံတကာခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ကမၻာတစ္၀န္း၌ ဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား၊ ကတ္မ်ားကို ျပန္လည္ရယူရန္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးစနစ္သည္ ကပ္ေရာဂါဆိုးမွ ျပန္လည္႐ုန္းထရန္ ဖိအားမ်ားရွိလာသည္။ သည်ဗျူဟာက Gucci, Kaya, Wanbao နဲ့ Prada အပါအဝင် ဇိမ်ခံပစ္စည်း ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က တရုတ်မှာ အွန်လိုင်းရှော့ပင်းဖွင့်လှစ်ပြီး ရောင်းချမှုကို ဖန်တီးဖို့ ကူညီခဲ့ပါတယ်။
Topics: မြင်ကွင်းGucci ဟာ Alibaba ရဲ့ delivery delivery hall: Global Luxury building cards မှာ ပါဝင်ဖို့
McKinsey ရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာအရ တရုတ်စားသုံးသူတွေဟာ ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးကြီး ဇိမ်ခံပစ္စည်းဈေးကွက်ရဲ့ သုံးပုံတပုံလောက် ရှိကြပါတယ်။ သို႔ေသာ္ ဈေးဆိုင်အများစုမှာ ပြည်ပခရီးစဉ်တွေမှာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်လေ့ရှိပါတယ်။
Digital luxury Group ရဲ့ မန်နေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ Pablo Maung Long က “လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်က အွန်လိုင်းကနေ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ ရောင်းချတဲ့ ကိစ္စဟာ မဖြစ်သေးဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။ သူက ဆက်ပြီး “ကုန်စျေးနှုန်း မြင့်တင်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့် ဆိုင်ခန်း အတွေ့အကြုံ အစပ်သဘောအရ ပိုမိုအရေးကြီးသည့် အချက်အဖြစ် သတ်မှတ်၍ Covid-19ကို ဖော်ဆောင်ခြင်း ပြု၍ အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းပြုခဲ့သည်” ဟု ဆိုသည်။
၂၀၂၁ မှာ တရုတ်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေပိုမိုရရှိလာနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Bayne Corp ရဲ့ ၂၀၂၀ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ ရောင်းချမှု စုစုပေါင်းရဲ့ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်းပြီး စံချိန်တင် အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဇိမ္ခံပစၥည္းေစ်းကြက္တန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ယူ႐ို ၂၈၁၀ သန္းရွိရာမွ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ယူ႐ို ၂၁၇၀ သန္းသို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဇိမ်ခံပစ္စည်းလုပ်ငန်းတစ်ခုသာရှိပြီး ဆက်လက်ကြီးထွားနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဇိမ်ခံပစ္စည်းဈေးကွက်သည် တသီးပုဂ္ဂလ ယူရို သန်း ၄၄၀ အထိ အရွယ်အစား ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ Benn Corp က ၂၀၂၅ ခုနှစ်မှာ တရုတ်ဟာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဇိမ်ခံဈေးကွက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ယခုခေတ်တွင် ထောင်သောင်းရတု မျိုးဆက်များနှင့် ဇီးသီးများကို အစဉ်အဆက် စားသုံးသူများက ဖွဲ့စည်းထားသည့် တရုတ်ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကို အများဆုံး ဝယ်ယူနိုင်ကြသည်။ ပြည်တွင်း မီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ တရုတ်နိုင်ငံသည် ဇိမ်ခံပစ္စည်း ရောင်းချရမှု နှုန်းသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်း အထိ မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ၂၃ ရာခိုင်နှုန်း အထိ မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်း ရောင်းချရမှု ရာခိုင်နှုန်း ၁၅၀ ခန့် ရှိမည်ဟု သိရသည်။ Alibaba ရဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုရင် dating platform မှာ ကြောင်တစ်ကောင်ကို ထောင်ရတု မျိုးဆက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိအောင် ဇိမ်ခံပစ္စည်းအဖြစ် ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။
ကြောင်တွေ၊ WeChat တွေ၊ အနီရောင် ဈေးဆိုင်တန်းတွေက ဇိမ်ခံပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်တွေကို တရုတ်မှာ ခေတ်စားလာသလို အဓိက ပလက်ဖောင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ ပြောကြားချက်အရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ ဇိမ်ခံကား ၂၀၀ ကျော် လိုင်စင်ရခဲ့ပြီး ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးဆိုင်များ တည်ဆောက်ရောင်းချမှု တန်ဖိုးမှာ ၁၁၃၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာကြောင်း သိရသည်။
Right to Right: Red Mall, WeChat, Cat စတဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဇိမ္ခံပစၥည္းဆိုင္ေတြမွာပါ။
တရုတ်ဟာ ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး WeChat ဟာလည်း တရုတ်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဇိမ်ခံပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ကူညီခဲ့ပါတယ်။ ကုန်စည် ရောင်းချရမှု GDP သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် သန်း ၈,၀၀၀ အထိ ရှိလာမည် ဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ သြဂုတ်လအတွင်း ၁.၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိမည်ဟု သိရသည်။
Red Shopping Mall လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ Red Book လေးတစ်ခုဟာ တရုတ်လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်မှာ မျှဝေထားတဲ့ နာမည်တစ်ခုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ တရုတ်အလှကုန်ပစ္စည်းအများစုကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူနိုင်ပြီးမီဒီယာပလက်ဖောင်း . အခုဆိုရင် ဇိမ်ခံပစ္စည်း ၃၀ ကျော် ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး Red Shopping Mall မှာလည်း live လွှင့်ပွဲတွေလည်း ကျင်းပနေပြီဖြစ်လို့ တရုတ်စားသုံးသူတွေက ဒီအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုနားလည်လာကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။